काठमाडौंमा खुसुखुसु भुइँचालो जानुको कारण के? – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौंमा खुसुखुसु भुइँचालो जानुको कारण के?
काठमाडौंमा खुसुखुसु भुइँचालो जानुको कारण के?
काठमाडौंमा केही समययता भुइँचालोका साना धक्काहरू आइरहेका छन्। बुधबार दिउँसो पौने २ बजेतिर २.९ म्याग्निच्यूडको धक्का महशुस गरियो। यसको केन्द्रविन्दु कालिमाटी हो।
यसअघि साउन १९ र २० गते यस्तै साना कम्पन आएका थिए। साउन १९ गते राति पौने १२ बजे आसपास २.७ म्याग्निच्युडको भुइँचालो गएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट साँझ साढे ४ बजे ३.५ म्याग्निच्यूडको कम्पन आयो।
राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार यी सबै धक्का २०७२ को गोरखा भुइँचालोकै निरन्तरता हुन्।
काठमाडौं क्षेत्र हल्लाउने गरी खुसुखुसु भुइँचालो जानुको कारण के? के काठमाडौं फेरि अर्को ठूलो भुइँचालो जान सक्ने जोखिममा छ?
यसबारे बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका भूगर्भ वैज्ञानिक जन इलियट र उनका सहकर्मीले करिब चार वर्षअघि तयार पारेको शोधपत्र सम्झनु सान्दर्भिक हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल ‘नेचर जियोसाइन्स’ मा छापिएको उनीहरूको लेखले वैशाख १२ को भुइँचालो तरंग कहाँ पुगेर अड्कियो भनी व्याख्या गरेको छ।
भूगर्भविद्का अनुसार ठूलो धक्का आउँदा चुरे फेदमा जमिन चिरा परेर शक्ति निष्कासन हुनुपर्छ। २०७२ को भुइँचालो तरंग भने काठमाडौं हुँदै दोलखासम्म पुग्यो, तर चुरे फेदको जमिन चिरा पार्न सकेन।
तपाईंले कपडाको थान च्यातेको देख्नुभएकै होला। कपडा उधार्दा सुरुमा अलिकति च्यातिन्छ, बाटो बनेपछि धर्रर उध्रिँदै जान्छ। कपडा उध्रिने शक्तिलाई भुइँचालो तरंग मान्ने हो भने त्यो शक्ति काठमाडौंमुनि आएर अड्कियो। यहाँबाट दक्षिण सर्न सकेन।
दक्षिण सरेर चुरे फेदसम्मै पुगेको भए अझै भयावह भुइँचालो जान सक्थ्यो। बीचमै अड्कियो, ठूलो जनधन क्षति टर्यो। भविष्यलाई खतराको घन्टी बनेर भने झुन्डिएकै छ। अहिले काठमाडौंमा महशुस गरिएको धक्का त्यही खतराको घन्टी हो।
पहिलो, अड्किएको चिरा विस्तारै फुक्दै जानेछ र सानो–सानो भुइँचालोबाट शक्ति ‘रिलिज’ हुनेछ। काठमाडौं र वरपर क्षेत्रमा केन्द्रविन्दु बनाएर जाने स–साना भुइँचालाले यहाँ गाँठो परेको चिरा उधार्दै चुरे फेदसम्म पुर्‍याइदिन सक्छ।
यसो भइदिए साना म्याग्निच्युडका भुइँचाला लामो समय गइरहनेछन्। पछिल्लो समय आइरहेका धक्का त्यसैको निरन्तरता हुनसक्छ। यही गतिमा शक्ति निख्रिन धेरै वर्ष लाग्न सक्छ, तर कम जोखिमपूर्ण हुन्छ।
उनले भनेजस्तो एकैचोटि ठूलो भुइँचालो जान्छ भन्ने ठोस आधार केही छैन। बरू नेपालको भुइँचालो इतिहासले यसरी जम्मा भएको शक्ति स–साना धक्काबाट लामो समय लगाएर ‘रिलिज’ हुने सम्भावना बढी देखाउने भूगर्भविद् बताउँछन्।
तेस्रो, काठमाडौंमुनि अड्किएको शक्ति न एकै धक्कामा घिटिक्क बाहिर आउनसक्छ न त लामो समय लगाएर विस्तारै फुक्दै जानेछ। बरू पिप भरिएको पिलोजस्तो ५०–६० किलोमिटर तलसम्म गुजुल्टिँदै बस्छ र केही समयपछि बाहिर आउँछ।
अब अर्को प्रश्न- पाँच वर्षपछिका धक्कालाई पनि २०७२ कै निरन्तरता वा ‘परकम्पन’ किन भनिएको होला?
कुनै पनि कुरामा गल्ती होइन, समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्नुहोस्- हेनरी फोर्ड
सन्तान जन्माउने योजनामा छैनन् राजेश हमाल !
विदेशमा रहेका ४ लाख नेपालीले रोजगारी गुमाउने, कुन देशमा कतिले गुमाउँदैछन् रोजगारी ?